Muxuu noqon karaa xiriirka cusub ee Puntland iyo dowladda Federaalka? – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Muxuu noqon karaa xiriirka cusub ee Puntland iyo dowladda Federaalka?
Allhadaaftimo January 8, 2019 Uncategorized
Iyadoo maanta uu Siciid Cabdullaahi Deni ku guuleystay doorashada xilka madaxweynaha ee maamul goboleedka Puntland ayey dad badan isweydiinayaan sida uu noqon karo xiriirka ka dhaxeyn doona maamulkiisa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.
In kastoo bilihii lasoo dhaafay ay sii wiiqmeysay awoodda iskaashi ee maamul goboleedyada, haddana maxaa laga filan karaa Madaxweyne Deni, tallaabo noocee ah ayuuse qaadi doonaa maamulkiisa?.
Maxamed Nuur Caalin, oo aqoon dheer u leh Siciid Candullaahi Deni, isla markaana horay ula soo shaqeeyay ayaa BBC-da la wadaagay aragtidiisa ku aaddan arrintaas. Waxa uu noo sheegay in uu Siciid yahahay nin 30-kii sano ee ugu dambeysay ku sugnaa gudaha dalka Soomaaliya isla markaana siyaasadda ku soo biiray dabayaaqadii 1990-meeyadii.
Previous Cabdiweli Gaas muxuu eersaday?
Next Xildhibanada Golaha Wakjilada Oo Si Kala Duwan Uga Hadlay Madaxweynaha Cusub Puntland